လုပ်ငန်းခွင်မှာသာမက ကျောင်းတွေမှာလည်း project တွေလုပ်ရတဲ့အခါ presentation တွေလုပ်ရတဲ့အတွက် presentation နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ key word လေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(လူစုလူဝေးကြားတွင် ဟောပြောတာ၊ သီဆိုကပြ ဖျော်ဖြေတာကို နားထောင်သူ၊ ကြည့်ရှု့သူ ပရိတ်သတ် များကို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
How many people do we expect in today’s audience?
ဒီကနေ့ ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ လူဘယ်လောက်များများရှိမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားသလဲ?
(သက်မွေးဝမ်းကျောင်းတူတဲ့ ပုဂ္ဂုလ်တွေ၊ သီးခြားလုပ်ငန်းထဲက ကိုယ်စားလှယ် ပုဂ္ဂုလ်တွေ၊ ရက်ပေါင်းများစွာ စုဝေးပြီး အစည်းအဝေးတွေ presentation တွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ကြတာကို ကွန့်ဖရင့်(သို့) ညီလာခံလို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြပါတယ်။)
The sales conference will be held in Sydney this year.
ဒီနှစ်ထဲမှာ အရောင်းဆိုင်ရာ ကွန့်ဖရင့်ကို ဆစ်ဒနီမှာ ကျင်းပလိမ့်မယ်။
Recommended for you - သာမန်ထက်ပိုတော်နေတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့အချက်များ
(တစ်ခုခုကို ညှိနှိုင်းကြ၊ ဆွေးနွေးကြ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြဖို့ လူတွေဆုံဆည်းကြတဲ့ အခမ်းအနားကို အစည်းအဝေး၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲလို့ ခေါ်ဆိုသုံးစွဲကြပါတယ်)
The weekly planning meeting has been cancelled.
အပတ်စဉ်ဆွေးနွေးနေကျ စီမံချက်အစည်းအဝေးကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။
(ပရိတ်သတ်ရှေ့မှာ မိမိက ပြင်ဆင်လာပြီး ဟောပြောတင်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
She has been invited to giveapresentation at the board meeting.
ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ ဟောပြောဖို့ သူမ ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရတယ်။
Recommended for you - အခက်အခဲကိုယ်စီနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဘဝများ
(ဟောပြောတင်ပြတဲ့ ပုဂ္ဂုလ်ကို ခေါ်တာပါ)
One of the speakers is an expert in company law.
ဟောပြောတဲ့ ပုဂ္ဂုလ်တွေထဲက တစ်ယောက်ဟာ ကုမ္ပဏီဥပဒေကို ကျွမ်းကျင်တယ်။
(များသောအားဖြင့် နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပုံမှန်လိုလို ဟောပြောကြတာမျိုးကို ခေါ်ဆိုပါတယ်။ မြန်မာမှာတော့ မိန့်ခွန်းလို့ပဲ မှတ်သားနိုင်ပါတယ်)
Talk ကို တစ်နည်းအားဖြင့် presentation လို့လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
I’d like to thank our speaker foravery interesting talk.
ဟောပြောတဲ့ ပုဂ္ဂုလ်က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် ဟောပြောနိုင်တာကို ကျွန်တော်ဖြင့် ကျေးဇူးတင်တယ်။
လုပျငနျးခှငျမှာသာမက ကြောငျးတှမှောလညျး project တှလေုပျရတဲ့အခါ presentation တှလေုပျရတဲ့အတှကျ presentation နဲ့သကျဆိုငျတဲ့ key word လေးတှကေို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
(လူစုလူဝေးကွားတှငျ ဟောပွောတာ၊ သီဆိုကပွ ဖြျောဖွတောကို နားထောငျသူ၊ ကွညျ့ရှု့သူ ပရိတျသတျ မြားကို ချေါဝျေါသုံးစှဲတာ ဖွဈပါတယျ။)
ဒီကနေ့ ပရိတျသတျအနနေဲ့ လူဘယျလောကျမြားမြားရှိမယျလို့ ကြှနျတျောတို့ မြှျောလငျ့ထားသလဲ?
(သကျမှေးဝမျးကြောငျးတူတဲ့ ပုဂ်ဂုလျတှေ၊ သီးခွားလုပျငနျးထဲက ကိုယျစားလှယျ ပုဂ်ဂုလျတှေ၊ ရကျပေါငျးမြားစှာ စုဝေးပွီး အစညျးအဝေးတှေ presentation တှေ ဆကျတိုကျပွုလုပျကွတာကို ကှနျ့ဖရငျ့(သို့) ညီလာခံလို့ ချေါဝျေါသုံးစှဲကွပါတယျ။)
ဒီနှဈထဲမှာ အရောငျးဆိုငျရာ ကှနျ့ဖရငျ့ကို ဆဈဒနီမှာ ကငျြးပလိမျ့မယျ။
Recommended for you - သာမနျထကျပိုတျောနတေယျဆိုတာ ဖျောပွနတေဲ့အခကျြမြား
(တဈခုခုကို ညှိနှိုငျးကွ၊ ဆှေးနှေးကွ ဆုံးဖွတျခကျြခကြွဖို့ လူတှဆေုံဆညျးကွတဲ့ အခမျးအနားကို အစညျးအဝေး၊ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးပှဲလို့ ချေါဆိုသုံးစှဲကွပါတယျ)
အပတျစဉျဆှေးနှေးနကြေ စီမံခကျြအစညျးအဝေးကို ဖကျြသိမျးလိုကျတယျ။
(ပရိတျသတျရှမှေ့ာ မိမိက ပွငျဆငျလာပွီး ဟောပွောတငျပွတာ ဖွဈပါတယျ။)
ဘုတျအဖှဲ့အစညျးအဝေးမှာ ဟောပွောဖို့ သူမ ဖိတျချေါခံခဲ့ရတယျ။
Recommended for you - အခကျအခဲကိုယျစီနှငျ့ ကိုယျပိုငျဘဝမြား
(ဟောပွောတငျပွတဲ့ ပုဂ်ဂုလျကို ချေါတာပါ)
ဟောပွောတဲ့ ပုဂ်ဂုလျတှထေဲက တဈယောကျဟာ ကုမ်ပဏီဥပဒကေို ကြှမျးကငျြတယျ။
(မြားသောအားဖွငျ့ နိုငျငံရေးသမားတှေ ပုံမှနျလိုလို ဟောပွောကွတာမြိုးကို ချေါဆိုပါတယျ။ မွနျမာမှာတော့ မိနျ့ခှနျးလို့ပဲ မှတျသားနိုငျပါတယျ)
Talk ကို တဈနညျးအားဖွငျ့ presentation လို့လညျး သုံးနိုငျပါတယျ။
ဟောပွောတဲ့ ပုဂ်ဂုလျက စိတျဝငျစားစရာကောငျးအောငျ ဟောပွောနိုငျတာကို ကြှနျတျောဖွငျ့ ကြေးဇူးတငျတယျ။
Read 2351 times Last modified on Wednesday, 11 October 2017 11:35
ဝန်ထမ်းလောက၌ ကြုံတွေ့နေရမည့် အချက်များ
သက်လတ်ပိုင်းတွင် စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းကြောင့် သက်ကြီးပိုင်း၌ မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးနိုင်
တရုတ်နိုင်ငံကပေးအပ်သည့် China Development Bank Scholarship 2018: Master Program ပညာသင်ဆု